အမျိုးသမီး ၂ဝဝ ကျော်တိုင်၍ ဘီဘာလီဟဲလ်ရဲစခန်းက ဝိန်းစတိန်းနှင့် ဂျိမ်းစ်တိုဘက်တို့ကိုစစ်ေ? - Yangon Media Group
အမျိုးသမီး ၂ဝဝ ကျော်တိုင်၍ ဘီဘာလီဟဲလ်ရဲစခန်းက ဝိန်းစတိန်းနှင့် ဂျိမ်းစ်တိုဘက်တို့ကိုစစ်ေ?
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁ ၊ ဘီကာလီဟဲလ်ရဲစခန်းက ၄င်းတို့သည်တိုင်ကြားမှုပေါင်း များစွာရှိနေ၍ ထုတ်လုပ်သူဟာ ဗေးဝိန်းစတိန်းနှင့် ဒါရိုက်တာဂျိမ်းစ် တိုဘက်တို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ ကြောင်း၊ ၄င်းတို့မှာ မလိုလားအပ် သော မုဒိမ်းမှုများကိုကျူးလွန်ခဲ့ ကြသူများဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။
ဝိန်းစတိန်းကျူးလွန်ခဲ့သော မုဒိမ်းမှုများစာရင်းကို ပြီးခဲ့သော လက နယူးယောက်တိုင်းမ်သတင်း စာကဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ အခြားလူများကို လည်း မကြောက်တမ်းထုတ်ဖော် ပြောကြားကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့ သည်။ စွပ်စွဲကြသည့်အထဲတွင် ဟောလိဝုဒ်နှင့်အခြားနေရာဒေသ အနှံ့မှ အမျိုးသမီးများလည်းပါဝင် ခဲ့ကြသည်။
ရဲစခန်းက”မကြာမီက ကျူးလွန်ခဲ့သော အစီရင်ခံစာ”ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တိုင်ကြားသူများ၏အချက် အလက်များကိုမူ အသေးစိတ်ဖော် ပြမထားဟုဆိုသည်။ နောက်ထပ် ကြေညာချက်ထပ်ထုတ်မည်မဟုတ် ဟုလည်း ဖော်ပြထားခဲ့သည်။
တိုင်ကြားသူအမျိုးသမီး ၅ဝ ကျော်ရှိရာ မင်းသမီးရိုင်းနက်သ် ပေါလ်ထရော၊ အင်ဂျလီနာဂျိုလီ နှင့်မီရာဆိုဗီနိုတို့ပါဝင်ကြသည်။ ¤င်းတို့က အသက်(၆၅)နှစ်အရွယ်ရှိ ဝိန်းစတိန်းက ¤င်းတို့အားမတရား ပြုကျင့်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ စာဖြင့်၊ အီးမေးလ်ဖြင့်၊ ဖုန်းဖြင့်တိုင် ကြားသူအမျိုးသမီး ၂ဝဝ ကျော်ရှိ သည်ဟုဆိုသည်။
ဝိန်းစတိန်းနှင့်တိုဘက်တို့က မူ အဆိုပါစွပ်စွဲချက်များကို ငြင်းဆို ခဲ့ကြသည်။
WeChat နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရောင်းဝယ်ခြင်းကြောင့် မန်းကျောက်ဈေးကွက် ထိခိုက်လာနိုင်ဟု ဆို
လော့တေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူကို အခွန်ရှောင်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁ဝ နှစ်ချမှတ်ရန် တောင်ကိုရီးယားအစ?
အမှုဖွင့်ခံထားရသည့် RFA သတင်းထောက် လာမည့် အပတ်အတွင်း ရဲစခန်းတွင် လာရောက် အစစ်ခံမည်
အာနန္ဒစန္ဒြကျောက်စာကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းဝင်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ?
၂ဝ၁၈ – ၂ဝ၁၉ ပညာသင်နှစ် အခြေခံပညာကျောင်းများ စတင်ဖွင့်လှစ် ကျောင်းအပ်နှံခြင်း မရှိသော ကျောင်
သီတင်းကျွတ်ပွဲ အမီ ရောင်းချနိုင်ရန် စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ကျောက်တာရွာ ကျောက်ပျဉ် ထုတ်လုပ်သူမျ